marika“Crafter” izy ka naharoboka mpividy iray. Araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena,
raikitra 45 tapitrisa ilay fiara, noho ny halaviran-toeran’ny mpividy anefa dia efa azony ny
vodiondrim-barotra fa 7 tapitrisa sisa alohan’ny mpividy amin’ny fotoana handraisana ny entam-
barotra. Tamin’ny ora nifanomezana hanaterana ny vola ambiny sy hijerena mivantana ilay fiara ka
itondrana izany mody anefa nanjavona ilay mpivarotra ka vasoka teo ilay mpividy. Nametraka
fitoriana avy hatrany ity farany ka nanomboka teo ny famotorana sy ny fitsirihana nataon’ny
mpitandro filaminana. Tratra tao amin’ny adiresy misy ny tranony izay nanoratany ny laharana
findainy nanaovany “facebook” ity olon-dratsy ity. Nandritra ny famotorana, niaiky ny heloka vitany
izy ary nilaza fa tsy misy akory ilay fiara lazainy fa hamidy. Natolotra ny fampanoavana ny asabotsy 16
marsa teo ny raharaha. Maro ireo voafitaky ny filazana famarotana amin’ny tambazotran-tserasera
ka ireo varotra nomerika izay mitombina no lasibatr’izany. Any amin’ny tany mandroso mantsy efa
miaraka amin’ny doka ny fanomezan-dalana manokana nomena azy ireny, araraotin’ny mpanao ratsy
maro io gaboraraka amin’ny sereseran’ny tambazotram-piarahamonina io. Tsy vitsy koa ireo tsy
manadihady fa roboka avy hatrany mahita ny hamoran’ny sera.